I-Pinegrow: Isihleli Esimangalisa sedeskithophu nge-WordPress Integration | Martech Zone
NgoMsombuluko, Julayi 20, 2015 NgeSonto, ngoJulayi 19, i-2015 Douglas Karr
Ngiqinisile angiqiniseki ukuthi ngake ngabona isihleli sekhodi esihle kakhulu emakethe kune Iphayinaphu. Umhleli unikeza hlela-endaweni ukusebenza kanye nokubukwa kuqala kokuphendula okwenziwa ngesikhathi sangempela. Okuhle kunakho konke, Iphayinaphu ayingezi noma yiziphi izinhlaka, izakhiwo noma izitayela kukhodi yakho.
Ezinye izici ezibalulekile ze Iphayinaphu:
Editing - Faka, hlela, hambisa, hlanganisa noma susa izakhi ze-HTML.
Framework - Ukusekelwa kweBootstrap, Foundation, AngularJS, 960 Grid noma i-HTML.
Ukuhlelwa kwamakhasi amaningi - Hlela amakhasi amaningi ngasikhathi sinye. Duplicate and mirror pages - even with different zoom amazinga kanye nosayizi wedivayisi.
I-CSS Editor - Hlela imithetho ye-CSS ngokubukeka noma ngekhodi. Sebenzisa umphathi we-Stylesheet ukulingisa, ukunamathisela nokususa izitayela.
Ukuhlela iwebhu - Faka i-URL bese uhlela amakhasi akude: shintsha ukwakheka, hlela umbhalo nezithombe, shintsha imithetho ye-CSS.
Izakhiwo Eziphendulayo - Dala izakhiwo eziphendulayo ngethuluzi lomsizi wombuzo weMedia. Faka ama-breakpoints wangokwezifiso noma uvumele i-Pinegrow ithole ngokuhlaziya amashidi wesitayela.
Okumangalisa nakakhulu, iPinegrow ine-add-on ye-WordPress ekuvumela ukuthi ufake izinto ze-WordPress futhi ubonise okuqukethwe kwangempela. Lesi isici esihle kakhulu kulabo abathuthukisa noma abahlela izingqikithi ze-WordPress.
Tags: ikhodi yomhlelihlela-endaweniphp umhleliumhlonyaneumhleli wetimu we-wordpressumabhebhana
Imithetho Yokugaxekile: Ukuqhathaniswa kwe-US, UK, CA, DE, ne-AU
I-Rodrigo Ribeiro de Abreu (Milano)
Okthoba 29, 2015 ngo-10: 09 AM
Ngisebenzisa iPinegrow ekuhambeni kwami ​​komsebenzi futhi manje ngisebenza ngo-2x ngokushesha okukhulu. Noma ngaphezulu.
May 28, 2017 ku-4: 48 PM
Uthando lukaphayini. Ngithole namanye ama-plugins wamahhala ongawalanda lapha https://pluginsforpinegrow.com